Wakiillada Beesha Caalamka oo caawa Xalane kulan kula yeeshay Qoor Qoor, Guudlaawe iyo lafta green. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wakiillada Beesha Caalamka oo caawa Xalane kulan kula yeeshay ...
Wakiillada Beesha Caalamka oo caawa Xalane kulan kula yeeshay Qoor Qoor, Guudlaawe iyo lafta green.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in caawa uu halkaas ka dhacay kulan u dhaxeeya Wakiillada Beesha Caalamka iyo Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada taabacsan dowladda federaalka ee Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed.
Wararka ayaa sheegaya in Beesha caalamka ay kala hadleen sadaxdaas maamul in la sii wado shirkii mnaanta ay dowlada Somaliya ay sheegteen in uu fashilmay shirkii ka socday Teendhada Afisyooni.
Ilo ku dhaw shirka caawa dhex-maray xubnaha beesha caalamka iyo madaxda maamullada taabacsan dowladda federaalka ayaa sheegaya in beesha caalamku ay culeys ku saartay madaxda seddaxda maamul goboleed in aysan shirka ka bixin, maadaama ay mar kasta u hoggaansamaan go’aanka uu qaato Madaxweyne Farmaajo.
Sidoo kale Labada dhinac ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo khilaafka dhamba uu dhex yaallo ayaa hadda midba midka kale waxa uu ku eedeynayaa inuu fashiliyey wadahadalladii Afisyooni ee gogol xaarka u ahaa shirweynaha wadatashiga.
Previous articleDuuliye ay diyaaraddiisa burburtay oo 36 maalmood ka dhuumanayay masas iyo yaxaasyo
Next articleWado muhiim u ah dadka muqdisho iyo Jowhar oo dhisme lagu bilaabay.
“Abaal nin galaa badan, nin gudaa se yar.”(qiso Xanuun badan)
Askari ka tirsanaa ciidankii Nabadsugidda Soomaaliya ee Dowladdii Kacaanka ayaa habeen habeennada ka mid ah heegan lagu qoray. Xabsi ay maxaabbiis badani ku jireen...
Wasiirka difaaca Germany oo sheegtay in gaashanbuurta Nato ay diyaar...
Siyaasiyiinta uu ka mid yahay lafta gareen , Jawaari, Mursal...
20 qof la la yahay markii roobab mahiigaan ah ay...